स्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नु पर्दछ ? भाग – २ - Manokranti Centre
स्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नु पर्दछ ? भाग – २
April 9, 2019by Manokranti1
सम्भोग प्रक्रियामा नै सुधार गर्नु जरुरी छ ।
संसारमा यत्रा क्रान्तिहरू भए, लोककल्याणकारी नियम र कानुनहरू बने, मानवअधिकारको विषयलाई संसारमै प्रमुख महŒवको विषय बनाइयो । तैपनि, ९५ प्रतिशतलाई पाँच प्रतिशतले किन शासन गरिरहेका छन् त ? एक सय वर्षअगाडि पनि कार्ल माक्र्सले ९५ प्रतिशतलाई लुटेर पाँच प्रतिशत सम्पन्न भए भन्नुहुन्थ्यो । आज पनि हामी त्यही भनिरहेका छौँ । किन ? यत्रा सुधार र प्रयत्नका विपरीत पनि सबै मानिस किन समान बन्न सकिरहेका छैनन् । उस्तै शिक्षादीक्षा, उस्तै पारिवारिक वातावरण र अवसर भए पनि एउटा धेरै माथि पुग्छ, एउटा भएको ठाउँबाट पनि तल खस्छ । किन ? हामीले यसलाई जबसम्म समीक्षा गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहन्छन् । यी समस्या न्यूनीकरणका लागि गर्भाधान प्रक्रियाबाट नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । कस्तो सन्तान जन्माउने भन्नेबारे आमाबाबुले होशपूर्वक तयारी गर्नुप¥यो । तर, यहाँ के भइरहेको छ भने, मदिरा पिएर हामीहरू बेहोशीमा सम्भोग गर्छाैं । गर्भ रहन्छ । अनि सन्तान बुद्धजस्तै ज्ञानी भइदेओस् भन्ने कामना गर्छाैं । हामी बीउ कागतीको रोप्छौँ र फल सुन्तलाको रूपमा फलोस् भन्ने कामना गर्छाैं ।
यसो भनिरहँदा फेरि अर्काे अर्थ लाग्न सक्छ । बच्चाको विकासमा उसको जन्मपछिको वातावरणको भूमिका हुँदैन त ? हुन्छ । यसलाई बुझ्नका लागि ‘जेनेटिक्स’सम्बन्धी खोज र अनुसन्धानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जेनेटिक्सले व्यक्तिको रोग, स्वभाव, उचाइ, आकारप्रकार जिनमा आधारित हुन्छ भन्छ । पछिल्लो खोजले ‘एपी जेनेटिक्स’ पत्ता लागेको छ । एपी जेनेटिक्सले के भन्छ भने जिनलाई पनि वातावरणले प्रभावित पार्छ । एक खालको जिन लिएर जन्मिएको मानिस पनि फरक वातावरणमा हुर्कियो भने उसको जिनभन्दा फरक व्यक्तित्व निर्माण हुन सक्छ । तसर्थ जेनेटिक्स र एपी जेनेटिक्स दुवै सत्य हुन् । सम्भोगको चरणमा आएको आत्मा (चेतना) र जन्मिएपछि प्राप्त वातावरणले पार्ने प्रभाव दुवै सत्य हुन् । अहिले संसारका सम्पूर्ण शिक्षा र सिस्टम जन्मपछिको वातावरणमा केन्द्रित छन्, तर त्यसको निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा खासै काम हुन सकेको छैन ।
युरोप अमेरिकातिर गर्भाधानको तयारी गर्ने चलन बढिरहेको छ । बच्चा जन्माउनुभन्दा दुई वर्षअगाडि डक्टरकोमा जाने, शरीरमा भिटामिन, मिनरल के पुगेको छैन, त्यसको पूर्ति गर्ने । तनाव छ भने तनाव व्यवस्थापन गर्ने । मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएपछि मात्र बच्चा जन्माउन सेक्स गर्ने ।
भनिन्छ, ५० प्रतिशत काठमाडौँवासीमा भिटामिन डीको कमी छ । भिटामिन डीको कमीले झर्काेपन र डिप्रेसन निम्त्याउँछ । भिटामिन डीको कमी भएका दम्पतीहरू स्वस्थ सेक्सका लागि कहिल्यै तयार हुन सक्दैनन् । तर, पनि उनीहरू सेक्स त गर्छन् । अनि, यस्तो सेक्सबाट जन्मने बच्चा पनि पूर्ण स्वस्थ हुन सक्दैन ।
अर्काेतर्फ आमनेपाली महिलालाई आइरनको कमी छ । आइरनको कमीले चञ्चलता बढ्छ । आइरन कमी भएको बेलामा सेक्स गरेर जन्मिएको बच्चा चञ्चल हुन्छ । स्कुलको पढाइमा उसको ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन ।
अहिलेका बच्चाहरूमा रिसको मात्रा बढी छ भन्ने गरिन्छ । शरीरलाई चाहिने म्याग्नेसियमको मात्रा पुगेन भने रिस बढी उठ्छ । यदि पत्नीले म्याग्नेसियमको मात्रा शरीरमा नपुगिरहेको अवस्थामा सेक्स गर्दा पतिले छोएको पनि उनलाई मन परिहेको हुँदैन वा पतिको क्रियाकलापमा उनलाई रिस उठिरहेको हुन्छ । तैपनि उनी मन नलागी–नलागी सेक्समा सरिक हुन्छिन् । यस्तो सेक्समा गर्भ रहेर जन्मिएको बच्चा जन्मजातै रिसालु हुन्छ । स–साना कुरामा झगडा गरिरहने हुन्छ ।
धर्तीको भविष्य बदल्नु छ । राम्रा राजनेता, गज्जबका बैज्ञानिक वा शान्त मानिस जन्माउनु छ भने गर्भाधान प्रक्रियाबाटै सचेत हुनु जरुरी छ । जन्मिसकेपछि दिने शिक्षादीक्षाले मात्र पुग्दैन । गर्भाधान प्रक्रियामा सुधार गर्ने हो भने कम खर्चमै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । जन्मिएपछि ल्याउने सुधारमा ठूलो खर्चमा सानो परिवर्तन प्राप्त हुन्छ ।
बच्चा जन्माउने आमाबाबु ‘पर्फेक्ट’ हुनका लागि पूर्ण निन्द्रा, सन्तुलित भोजन, सन्तुलित व्यायाम, सकारात्मक मानसिकता र प्रकृतिसँगको सान्निध्य (घाम ताप्नु) जस्ता पाँच वटा तालमेलको आवश्यकता पछन् । यी पाँच कुरा नमिलीकन सन्तान जन्माउनु हुँदैन ।
Wow, it’s enlightening! Thank you Manokranti for such an eye-opening piece of writing.
LeaveaReply to Mohan Saun Cancel Reply
previousस्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नुपर्छ ? भाग - १
nextगुरु एक परिचय
गुरु एक परिचय
स्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नु पर्दछ ? भाग - २
स्वस्थ सन्तान जन्माउन के गर्नुपर्छ ? भाग - १
Dr_yogi_vikashananda Guru_urja manokranti Meditation yogi_vikashananda